ရိုးရှင်းလှပငြိမ်းချမ်းသောဘ၀ | Mg Ogga's Notes
Mg Ogga / July 16, 2009
တောင်တန်းပြာပြာလေးတွေကိုနောက်ခံထားထားပြီးလှချင်တိုင်းလှပနေတဲ.ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို.လေးကနေ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကားလေးမောင်းပြီးတောင်ကုန်းပေါ်က မန်ကျည်းတောအုပ်သေးသေးလေးကိုဖြတ်သန်ကာလှပသေသပ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ.ရွှံအိမ်လေးများရှိရာခြံကလေးဆီသို.ကျွန်မတို.ရောက်လာကြတယ်။
ခြံထဲ ကိုဝင်လိုက်တာနဲ.ရင်ထဲအေးပြီး အမောအပန်းတွေဘယ်ပျောက်သွားလဲ မသိတော့ပါဘူး။ပထမဆုံးတွေတဲ့ ရွှံအိမ်လေးထဲ မှာခဏနားနေတုန်းမှာပဲ အင်္ကျီနွမ်းနွမ်းဝတ်ထားတဲ့ ထိုင်းအမျိုးသားကြီးတစ်ယောက်ဟာ လတ်ဆတ်တဲ့ အပြုံးကိုဆင်ယင်ပြီး ကျမတို.ဆီ ခပ်ခပ်သွက်သွက်လျှောက်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့ ရွှံ့ခုံလေးမှာ သူလွယ်အိပ်ဟောင်းလေးကိုတင်ပြီး ရယ်မောဖော်ရွှေစွာ နှုတ်ဆက်စကားပြောကြတယ်။နောက်တောင်ကုန်း လေးပေါ်က သူ့အိမ်လေးဆီသွားဖို.ဖိတ်ခေါ်တယ်။
မနေ့ကထဲက ဒီ ဖန်ဖန်ဆိုတဲ့ ခြံလေးအကြောင်းစကြာြးဲပီး သွားရမယ်ဆိုကတည်းက စိတ်ဝင်စားနေတာ အခုတော့တကယ်ဆုတောင်းပြည်.သွားတာပေါ။့ဒီခြံကလေးက တကယ်ကိုအေးချမ်းပြီး စိတ်ချမ်းမြေ.စရာနေရာ လေးတစ်ခုပါ။
အိမ်ရှင်ခေါ်လာလမ်းအတိုင်းတောင်းကုန်းလေးပေါ်တတ်လာရင်း ဘေးဘီကိုကြည်တော့ သီးပင်စားပင်တွေခြံရံ ခြံရံထားပြီး ချစ်စရာကောင်းလှတဲ့ နေချင်စရာရွှံ.အိမ်လေးတွေ ကိုကျမတို.အဖွဲ.ကလူတွေက ဓာတ်ပုံ တဖျတ်ဖျတ်နဲ့ အိမ်သာပါမကျန် အားရပါရကို မှတ်တမ်းတင်ကြတာပေါ့။ကျမနဲ့အတူပါလာတဲ့ ဆရာမတစ် ယောက်ရဲ. ၄နှစ်အရွယ်မြေးမလေးက “အဘွားဘာလို.အိမ်လေးတွေကဒီလောက်လှနေတာလဲ”မေးလိုက်တော့ အိမ်ရှင်အဖိုးကြီးရဲ.မျက်နှာကပီတီအပြုံးတွေဖြာလိုပေါ့။
နောက်အိမ်လေးဆီရောက်တော့ ဒီခြံလေးအကြောင်းနဲ့သူရဲ့ဘ၀အကြောင်းတွေကို ကျမတို.ကိုပြောပြလို. စိတ်ဝင်စားဖို.ကောင်းတဲ့ ဒီဖန်ဖန်ခြံလေးနဲ. ဦးလေးကြီးအကြောင်း တစွန်းတစသိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
“ကျနော်နာမည်ကဖိလှိုးပါ ထိုင်းနိုင်ငမြောက်ပိုင်းကတောရွာလေးတစ်ရွာကပါ ဟိုတုန်းထဲက ကျနော်တို.ဒေသ မှာလုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ပြီဆိုရင် ပိုကောင်းတဲ့ဘ၀တစ်ခုရဖို.အတွက်ဘန်ကောက်တက် အလုပ်လုပ်လေ့ရှိကြ တယ်ဗျ။ကျနော်လည်း လူပျိုပေါက်ဖြစ်တော့ ရောရာတဲ့ ရည်မှန်းချက်လည်းမရှိတော့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ရောယောင်ပြီး ဘန်ကောက်တက်အလုပ်လုပ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ဘန်ကောက်ဆိုတာကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲ ကျနော်တို.လို.တောသားတွေက တစ်နေ.ကို အနည်းဆုံး ၈နာရီ ကနေ အများဆုံး၂၄နာရီလောက်အလုပ်လုပ်ရ တယ်။ဒီလိုလုပ်ရလို.ထမင်းကောင်းကောင်းစားရသလားဆိုတော့လည်း ခေါက်ဆွဲပြုတ်နဲ့နှစ်ပါးသွားရတာများ တာပဲ။နေစရာကလည်းဗျာ ကျနော်တို.လို.တောသားလေးတွေ စုပြီးငှားထားတဲ့ တိုက်ခန်းကျဉ့်းကျဉ်းလေးမှာ ကျောတစ်နေရာစာရအောင်မနည်းနေတာဗျ။နောက်ကျနော်တို.လိုတောသားအများစုက အပြင်မှာဆိုရင် ကိုယ်ရဲ.တိုင်းရင်းဘာသာစကားကို မပြောဘူး ထုင်းစကားကိုဘန်ကောက်လေသံနဲ့တမင်လုပ်ပြောာကတယ်ဗျ။ ကျနော်ကတော့စကားလည်းသိပ်မပီတော့ တော်ရုံတန်ရုံလူတွေနဲ့စကားသိပ်မပြောဘူး။အရင်ကတော ဘန်ကောက်ဆိုတာ ပျော်စရာနေရာသုခဘုံလို.ထင်မှတ်ထားတာဗျ။အဒြီအချိန်မှာကျနော်ရဲ. ဘ၀အဓိပွါယ် ပျောက်ဆုံးနေတာပေါ့ဗျာ။နောက်ကျနော်စိတ်ညစ်တာနဲ့ရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။မိဘဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့ရွာမှာ အေးအေးချမ်းချမ်း နေမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ပေါ့။ဒါပေမယ်လည်းဗျာနေပူပူအောက်မှာကျောပူအောင်လုပ်ရတဲ့ တောင်သူလယ်သမားဘ၀က ကျနော်ကိုဒုတိယအကြိမ် ဘန်ကောက်ဆီတွန်းပို.ပြန်တယ်။ဘန်ကောက်မှာ သမာရိုးကျပုံစံအတိုင်းပဲ အလုပ်လုပ်လိုက်ဈေးဝယ်လိုက်အိပ်လိုက်စားလိုက်ပေါ့။ကျနော်ဒီဘ၀ကြီးကိုအတော် စိတ်ပျက်စေတယ်ဗျ။ဒီတခါတော့ဘ၀ရဲ.အေးချမ်းပျော်ရွှင်မှုအတွက်ပဲ အသက်ရှင်နေထိုင်မယ်ဆိုပြီး သေသေချာချာဆုံဖြတ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာပြီး စုထားတဲ့ငွေလေးနဲ့ခြံတခြံဝယ်ပြီးစနစ်တကျ ခြံစိုက်တယ် အားတဲ့အချိန်မှာရွာထဲကကလေးတွေနဲ့ကစားတယ်။တချို.လူတွေက ကျနော်အကြောင်းအတင်း ပြောကြတယ် ဒါသူတို.ပြဿနာပဲကျနော်ပြဿနာမဟုတ်မလားဗျ။သူများတွေက ဒီလို.ရွှံ့အိမ်လေးတွေဆောက် တာကောင်းတော့ကျနော်ကိုခေါ်ဆောက်ခိုင်းကြတယ်။ပြီးတော့ ကျနော်ပိုက်ဆံမလိုဘူးဆို.ပြီးမပေးကြဘူး ဒါသူတို.ပြဿနာပဲကျနော်ပြဿနာမဟုတ်ဘူး ဒါကျနော်လက်သုံးစကားဗျ။ တကယ်လည်းကျနော်ပိုက်ဆံ မလိုပါဘူဗျာ။စားစရာက ခြံထဲကရတယ် နေစရာက ဒီလိုရွှံအိမ်လေးတွေဆောက်ရတာခဏလေးနဲ့ဘာမှမခက် ဘူး။ကျနော် သူငယ်ချင်းကျောင်းဆရာတစ်ယောက် ဆိုရင် အိမ်တစ်လုံးရဖို.အတွက်အစိုးရဆီကပိုက်ဆံချေး တာနှစ်ပေါင်း၃၀လောက်လုပ်ဆပ်ရမယ်လို.ပြောတယ်။ကျနော်ကတော့လူဘ၀တိုတိုလေးအတွင်းမှာ ရုပ်ဝတ္ထုပစည်းတွေအတွက် အချိန်ကိုအလဟာသ မကုန်စေချင်ပါဘူးဗျာ။ကျနော်အခုအင်္ကျီဝယ်မ၀တ်တာ အတော်ကြာပြီ ခင်ဗျားတို.လိုလာလည်တဲ့လူတွေက လက်ဆောင်အင်္ကျီတွေပေးသွားကြတယ်။အခုဝတ်ထား တာကလည်းလက်ဆောင်ရထားတာ။ဒီအ၀တ်တွေကိုသန့်သန့်ရှင်းရှင်းလျှော်ဝတ်ရင်ရတာပဲဗျာကျန်းမာရေးနဲ့လည်းညီညွတ်နေပြီလေ။ကျနော်တို.ခန္ခာမှာလိုအပ်တာဒါပဲမှလား။ တချို့လူတွေဆီမှအ၀တ်အစားဗီရိုအပြည်.ရှိ ကြတယ်။ကျနော်အတွက်တော့ဒါအပိုပစ္စည်းတွေပဲ။အဲဒီအတွက် အခုခေတ်လူတွေအလုပ်ရူပ်နေကြတာ မဟုတ်လားကျနော်တို. ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကရောင့်ရဲခြိုးခြံ နေထိုင်ဖို.ဆုံးမခဲ့သားပဲဗျ။လိုချင်မှုကိစ္စတေနည်းနိုင်သမျှ နည်းအောင်နေရမယ်လေ။အမှန်တကယ် လိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာကွဲနိုင်ရမယ် မဟုတ်လား။ ကျနော်အထင်အရ ကမ္ဘာမြေကြီးက ကျနော်တို.လိုအပ်သလောက်ထုတ်ပေးနိုင်တယ် ဒါပေမယ်ကျနော်တို.ရဲ့အတောမသတ်နိုင်တဲ့ လိုချင်မှုတွေ အတွက်တော့သူခမျာလည်းမစွမ်းနိုင်ဘူး။အဲဒါကိုက
July 16, 2009 in စားသုံးသူဝါဒအကြောင်း, အတွေ့အကြုံ. Tags: အက်ဆေး စာတန်း
အားတင်းထား တာ →